Apple inogona kuburitsa Macs manomwe matsva nemachipisi akakwidziridzwa gore rino
February 21, 2022 by Martin6
Iyo Mac ndeimwe yezvigadzirwa zvikuru zveApple - yakasimba, inotsigirwa zvakanaka, uye inoita zvakanaka. Kana iwe kutenga Mac, unoziva kuti uri kuita mari yenguva refu isingaore mwoyo. Uye semakore apfuura, kambani iri kushanda nesimba mukuburitsa maMac matsva akazara nekuvandudzwa kwakati. Kuburitswa kutsva kunoratidza kuti Cupertino tech hofori inogona kunge iri kuburitsa mamodheru manomwe gore rino. Ivo vanonzi vachave vachifambiswa neakakwidziridzwa Apple silicon chips.
Maererano ne Bloomberg's Mark Gurman, Apple iri kuverenga maMacs matsva anofambiswa nesilicon yayo sechikamu chetatu chekugadzirisa kuri kuramba kuchiitika. Shanduko yeM machipi yakatanga kudzoka muna 2020 - iine MacBook Air, MacBook Pro uye Mac Mini ichive mhando dzekutanga kukanda Intel processors. Shanduko iyi yakatanga zvakare muna 2021 nekuburitswa kweiyo yakagadziridzwa, ine mavara iMac, ichiteverwa neM1 Max uye M1 Pro MacBook Pro modhi gare gare gore iroro. Gurman anotaura mamodheru manomwe eMac ayo Apple anogona kuburitsa mukati megore rino:
Iyo itsva Mac mini ine M1 Pro chip
Iyo 13-inch MacBook Pro ine M2 chip, kubudirira iyo 2020 modhi uye kugara pazasi pe14-inch uye 16-inch MacBook Pro mumutsetse.
Mac mini ine M2 chip
A 24-inch iMac ine M2 chip
Yakagadziridzwa MacBook Air ine M2 chip
Iyo yakakura iMac Pro ine M1 Pro uye M1 Max chip sarudzo
Iyo hafu-saizi Mac Pro, yekutanga ine Apple Silicon, ine yakaenzana maviri kana mana M1 Max machipi.
Iyo kambani yakatonyoresa maMac matatu matsva mudura reRussia rakaenzana neFCC. Izvi zvinosanganisira imwe yakanyorwa selaptop - inogona kunge iri runyerekupe M2 MacBook Pro. Mark anotenda kuti yekutanga kuburitswa ichave munaKurume 8 - pamwe nekuratidzwa kweiyo iPhone SE. Iye zvakare ane zvikonzero zvekutenda kuti Apple inogona kuunza mamwe mamodheru nekukurumidza muna Chivabvu kana June.
Iwe unoronga kutenga chero ye2022's rumored Macs? Kana zvakadaro, chii? Tizivise muchikamu chemashoko pazasi.
The post Apple inogona kuburitsa Macs manomwe matsva nemachipisi akakwidziridzwa gore rino yakatanga kutanga xda-vatadzi.
iMac 2018 musi wekubudiswa, UK mutengo, zvigadzirwa, zvinyorwa
Nyowani iMac 2021 zuva rekuburitsa, mutengo & tsananguro yeM1 iMac kugadzirisazve
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve Mac mini nyowani iri kuuya munguva pfupi
Yakanakisa Mac yekugadzirisa mafoto